आइफोन Archives - Technology Khabar
बाँकी बक्यौता नतिर्ने दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुलाई दूरसंचार प्राधिकरणको अन्तिम मौका
उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अब अनलाइनमार्फत जारी हुने
ताम्राकार कम्प्लेक्सको तेश्रो तल्लामा सामसङ मोबाइलको सर्भिस सेन्टर, भिआईपीलाई छुटै काउन्टर
नामी कलेज र इन्फोडेभलपर्स बीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता
Tag Archives: आइफोन
एप्पलले चिनियाँ बजारको लागि अण्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट रिडर भएको आइफोन ल्याउने
१८ असार २०७६, बुधबार १५:२२	Comments Off on एप्पलले चिनियाँ बजारको लागि अण्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट रिडर भएको आइफोन ल्याउने
काठमाडौं । एप्पलले चिनियाँ उपभोक्ताहरुको लागि नयाँ छुट्टै फीचरयुक्त आइफोन लन्च गर्ने भएको छ । हालै चीनमा सार्वजनिक भएको मिडिया रिपोर्टअनुसार आइफोनले चिनियाँ बजारमा बिक्री बढाउने प्रयाससहित नयाँ फीचरयुक्त आइफोन ल्याउन लागेको हो । आइफोनमा प्रयोग हुने फेसियल रिकोग्निसन सिस्टम फेस आईडी नयाँ आइफोनमा हटाईनेछ, त्यसको सट्टामा एप्पलले अण्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट फंग्सन प्रयोग गर्ने बताईएको छ । कम्पनीले सो कदम ...
आइफोन उत्पादन चीनबाट बाहिर सार्न एप्पललाई फक्सकनको सुझाब
९ असार २०७६, सोमबार १३:००	Comments Off on आइफोन उत्पादन चीनबाट बाहिर सार्न एप्पललाई फक्सकनको सुझाब
काठमाडौं । आइफोन एसेम्बल गर्ने ताइवानी कम्पनी फक्सकनले एप्पललाई आइफोन उत्पादन कारखानालाई चीनबाट बाहिर सार्न अनुरोध गरेको छ । फक्सकोनका संस्थापक टेरी गोले आइफोनको उत्पादनलाई चीनबाट बाहिर सार्न एप्पललाई अभिप्रेरित गरिरहेको बताएका छन् । कम्पनीको सबैभन्दा धेरै शेयर भएका कम्पनीका संस्थापक गोले भने, ‘मैले चीनबाट ताइवानमा सर्नका लागि एप्पललाई भनेको छु । मेरो विचारमा यो निकै सम्भव छ ।’ गोले ...
२८ माघ २०७५, सोमबार १२:२८	Comments Off on यस्तो डिजाइनमा आउनेछ आइफोन एसई २, नोच डिस्प्ले र वायरलेस चार्जिंग
काठमाडौं । एप्पलले सन् २०१९ मा तीनवटा क्यामरा भएका नयाँ आइफोनहरु ल्याउने संभावना रहेको छ । कम्पनीले आइफोन एक्स एस, आइफोन एक्स एस म्याक्स र आइफोन एक्सआरको सक्सेसर फोन ल्याउनेछ जून आइफोन ११ (iPhone 11) सिरिजमा आउन सक्नेछ । क्यामरा फीचरलाई जोड दिईने नयाँ आइफोनहरुमा कम्पनीले ट्रिपल क्यामरा सेटअप हुनेछ जसमा थ्रडी क्यामरा सिस्टम राख्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । ...
यस्तो डिजाइनमा आउनेछ एप्पलको नयाँ आइफोन, तीनवटा रियर क्यामरा
२५ पुष २०७५, बुधबार १६:४०	Comments Off on यस्तो डिजाइनमा आउनेछ एप्पलको नयाँ आइफोन, तीनवटा रियर क्यामरा
काठमाडौं । एप्पलले नयाँ आइफोनहरु सार्वजनिक गरेको केबल ३ महिना मात्र भएको छ तर नयाँ आइफोनको चर्चा शुरु भईसकेको छ । एप्पलको नयाँ आइफोन कस्तो डिजाइन र स्पेक सहित आउँछ भन्ने चर्चा विभिन्न कोणहरुबाट आईरहेको छ । यसैबेला नयाँ आइफोनको रेण्डर देखिएको छ । विभिन्न जानकारीहरु लीक गर्ने ट्वीटर एकाउन्ट अनलीक्सले नयाँ आइफोनको रेण्डर देखाएको छ ।नयाँ आइफोनको बारेमा कुरा ...
१७ मंसिर २०७५, सोमबार १८:५३	Comments Off on समस्या भएको आइफोनको ब्याट्री सस्तोमा फेर्ने समय सकिँदै, नेपालमा पनि उपलब्ध छ योजना
काठमाडौं । यदि तपाईँ एप्पलको आइफोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ र फोनमा ब्याट्री समस्या आएको छ भने तपाईँले सस्तो मूल्यमा ब्याट्री फेर्ने समय निकै कम रहेको छ । गत वर्ष एप्पलको आइफोनहरुमा पुराना ब्याट्रीका कारण फोन बन्द हुने र स्लो हुने समस्या आएपछि कम्पनीले सस्तो मूल्यमा ब्याट्री फेर्ने योजना ल्याएको थियो । कम्पनीले प्रयोगमा रहेका आइफोन एसई, आइफोन सिक्सभन्दा माथिका आइफोन एक्स ...
एप्पलको आइफोन एक्स सफ्टवेयर अपडेट गरिरहेको बेलामा पड्कियो, कम्पनीले अनुसन्धान गर्ने
२९ कार्तिक २०७५, बिहीबार १४:५५	Comments Off on एप्पलको आइफोन एक्स सफ्टवेयर अपडेट गरिरहेको बेलामा पड्कियो, कम्पनीले अनुसन्धान गर्ने
काठमाडौं । एप्पलको आइफोन एक्स अपडेट गरिरहेको बेलामा पड्किएको छ । आइफोन एक्स प्रयोगकर्ताले नयाँ सफ्टवेयर अपडेट गरिरहेको बेलामा एप्पलको आइफोन एक्स (iPhone X) पड्किएको हो । यो घट्ना अमेरिकाको वासिंगटनमा घटेको हो जहाँ एक प्रयोगकर्ताले आफूले १० महिनाअघि किनेको आइफोन एक्स सफ्टवेयर अपडेट गरिरहेको बेलामा पड्किएको दाबी गरेका हुन् । राहेल मोहम्मद नाम गरेका आइफोन एक्सका धनी तथा प्रयोगकर्ताले ...
एप्पलको नयाँ आइफोनमा ‘नोच डिस्प्ले’ को साटो ‘होल डिस्प्ले’ डिजाइन, यस्तो छ नयाँ पेटेन्ट दर्ता
२८ कार्तिक २०७५, बुधबार १७:०१	Comments Off on एप्पलको नयाँ आइफोनमा ‘नोच डिस्प्ले’ को साटो ‘होल डिस्प्ले’ डिजाइन, यस्तो छ नयाँ पेटेन्ट दर्ता
काठमाडौँ । टेक कम्पनी एप्पलले आइफोन एक्सका साथमा स्मार्टफोन उद्योगमा ‘डिस्प्ले नोच’को ट्रेण्ड सेट गरेको छ । तर अब भने कम्पनीले नयाँ डिजाइनको डिस्प्ले ल्याउने संभावना देखिएको छ । आगामी दिनमा एप्पलले ल्याउने आइफोनको डिस्प्लेमा सानो प्वाल मात्र देख्न सकिनेछ । आइफोनमा बेजल कमगर्नका लागि एप्पलले ‘होल इन डिस्प्ले’ दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । बेजल कमगर्नका लागि नोच डिजाइन आएको ...
स्मार्टफोनको बजार माग इतिहासमै पहिलो पटक नकारात्मक बिन्दूमा, यस्तो छ माग घट्नुको कारण
२४ कार्तिक २०७५, शनिबार १६:२१	Comments Off on स्मार्टफोनको बजार माग इतिहासमै पहिलो पटक नकारात्मक बिन्दूमा, यस्तो छ माग घट्नुको कारण
काठमाडौँ । कयौं वर्ष निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको विश्व स्मार्टफोन बजार माग अब भने ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । विश्व स्मार्टफोन बजारमा पहिलो पटक सन् २०१८ मा कमी आउने भएको छ । यसको अर्थ स्मार्टफोनको माग स्थीर बिन्दुमा आईपुगेको हो । विश्व स्मार्टफोन बजारको अध्ययन गर्ने संस्था काउन्टरपोइन्टका अनुसार सन् २०१८ मा पहिलो पटक १.३ प्रतिशतको कमी आउने छ ...
२० कार्तिक २०७५, मंगलवार १५:३३	Comments Off on एप्पलले ५जी प्रविधियुक्त आइफोन सन् २०२० मा ल्याउने
काठमाडौँ । टेक कम्पनी एप्पलको नयाँ स्मार्टफोनको बारेमा नयाँ जानकारी आएको छ । कम्पनीले सन् २०२० मा आउने आइफोनको बारेमा जानकारी आएको छ । फास्ट कम्पनीको एक रिपोर्टअनुसार पहिले ५ जी प्रविधिसहितको आइफोन ल्याउने तयारीमा रहेको छ । एप्पलको पहिलो ५जी आइफोनमा इन्टेल मोडम ८१६१ को प्रयोग हुनसक्ने छ भने यसको क्लाउड सन् २०२० मा स्टोरमा आउने छ । रिपोर्टकाअनुसार ...
३ कार्तिक २०७५, शनिबार १७:०१	Comments Off on तपाईँको स्मार्टफोनमा सिग्नलको समस्या आईरहेको छ? यी तरीकाहरु अपनाएर समाधान गर्नुस्
काठमाडौँ । स्मार्टफोनमा सिग्नल नहुने वा कुराकानी हुँदै गर्दा फोन काटिने समस्या अधिकांशले भोग्दै आएका हुन् । यस्तो कारणले गर्दा कल ड्रप हुने, इन्टरनेटको स्पीड स्लो हुने, खराव भ्वाइस क्वालिटी जस्ता समस्याहरु आउने गर्दछन् । मोबाइल फोन अहिलेको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको अवस्थामा फोनमा खराब नेटवर्कका कारण यूजर्सलाई निकै समस्या हुने गर्दछ । यस्तो समस्याको समाधान गर्ने उपायहरु पनि छन् । ...
नेपाल टेलिकमको ल्याण्डलाइन फोन र पोष्टपेड मोबाइलको स्वामित्व शुल्क घट्यो
करिब ८ लाख रुपैयाँ पर्ने साओमीको रेडमी के२० प्रो र के२० स्मार्टफोन, गोल्ड प्लेटेड लिमिटेड एडिसन
4G 5G Apple Apple inc. CG Electric Vehicle in Nepal Facebook Google Huawei Huawei Technologies Nepal Co. ims Lalitpur Mobile Complex Ncell Nepal Telecom Nepal Telecommunication Authority(NTA) Nokia NTC Oneplus Oppo samsung Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S8 Teletalk Pvt. Ltd. Twitter WhatsApp Xiaomi इन्टरनेट एनटिसी एनसेल एनसेल प्राइभेट लिमिटेड एप्पल ओपो ओपो नेपाल गूगल नेपाल टेलिकम नेपाल दूरसंचार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण फेसबुक शाओमी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सामसंग सामसंग नेपाल ह्वावे ह्वावे टेक्नोलोजीज कम्पनी लिमिटेड ह्वावे नेपाल
२ श्रावण २०७६, बिहीबार ००:११
२ श्रावण २०७६, बिहीबार ००:०५
१ श्रावण २०७६, बुधबार १९:३३
१ श्रावण २०७६, बुधबार १९:११
१ श्रावण २०७६, बुधबार १८:२४
१ श्रावण २०७६, बुधबार १७:४५
१ श्रावण २०७६, बुधबार १४:४०
१ श्रावण २०७६, बुधबार १३:४७